Qodobo Ducooyin Xoog Leh Oo Ka Soo Horjeeda Dhaxalka Xun | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Qodobbada Salaadda ee xoogga leh ee ka soo horjeeda Dhaxalka Xun
Qodobbada Salaadda ee xoogga leh ee ka soo horjeeda Dhaxalka Xun
Maanta waxaan la tacaali doonaa qodobbada salaadda ee xoogga leh ee ka dhanka ah dhaxalka sharka ah. Ruuxa Rabbi wuxuu ii muujiyey in mid ka mid ah dhibaatooyinka saameeya dad badan ay tahay dhaxal xumo. Iyagu maahan sababta tooska ah ee dhibaatooyinkooda. Qaarkood xitaa ma dhalan markii dhibaatooyinka la abuuray. Mu'miniin badan ayaa la ildaran dhibaatooyinkan laga dhaxlay. Waxay u daaladeen si hagar la’aan ah si ay naftooda uga xoreeyaan silsiladaha dhibaatadan, laakiin xalka ayaa weli ah kan ugu liita dhammaan xiriiriyeyaasha.
Sayidka waxaa lagu wadaa inuu dadkiisa ka xoreeyo dhibaatadan; taasina waa sababta uu u bilaabay mawduucan salaadda. Aan si dhaqso ah u helno faham wanaagsan oo dhaxalka sharka ah si aan u ogaanno sida loo tukado oo looga soo horjeedo. Ibraahim wuxuu la kulmay dib -u -dhac muddo sanado ah kahor intuusan Isxaaq dhalin. Intii uu sugayay muujinta barakada Ilaah, Ibraahim wuxuu u sujuuday cadaadiskii xaaskiisa wuxuuna la dhigay addoonkii Saara. Waxay ahayd nimcadan aan xurmada lahayn ee dhalatay Ismaaciil. Axdigii Rabbi lama joogin Ismaaciil inkastoo uu ahaa midhihii ugu horreeyey ee ka soo baxay dhexda Ibraahim.
Sidoo kale, Isxaaq sidoo kale wuxuu ahaa madhalays sannado kahor intuusan dhalin Yacquub iyo Ceesaw. Ruuxaas madhalaysnimada ah wuxuu dhaxal u noqday nasabkii Ibraahim. Oo ilmo kasta oo ugu horreeya oo ku abtirsada Ibraahim had iyo jeer ma barwaaqoobo sida walaalahood. Waxay dhex martay Ismaaciil iyo Isxaaq. Waxay ka dhex dhacday Ceesaw iyo Yacquub. Waxa kale oo ku dhacday Ruubeen. Markaad ogaato a qaabka xun dhacdooyin noloshaada ka mid ah oo u gaar ah qoyskaaga ama dadka ku dhex jira beeshaada, tani waxay tilmaan cad u tahay in dhaxal xun uu ku silcinayo.
Aynu sidoo kale tixgelinno xigashada caanka ah ee Baybalka, “aabbayaashu waxay cuneen canab dhanaan, carruurtiina ilkahoodii way qallafsan yihiin.” Waxa loola jeedaa Carruurtu waxay ka dhaxleen cadhadii Ilaah falalkii aabbahood sameeyey. Sannado badanna, waxay Isreal ku noqotay wax aargudashada Rabbi laga qaado dhowr qarni sababta oo ah waxay dadka qaar sameeyeen. Ilaa nebigu ku sheegay ruuxa Ilaah kitaabka Yexesqeel 18: 2, “Maxaad ula jeeddaa markaad maahmaahdan ku saabsan dalka reer binu Israa'iil ku tidhaahdaan, Aabbayaashii waxay cuneen canab dhanaan, carruurta ilkahoodiina way qasan yihiin geeska '? Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, Noloshaydaan ku dhaartaye, maahmaahdaan kuma dhex isticmaali doontid reer binu Israa'iil.
Sida runta ah Rabbiga noloshiisuu ku jiraa, dhaxal shar ah mar dambe noloshaada kuma yeelan doono, magaca Ciise. Ruuxa Ilaah wuxuu ku soo duuli doonaa noloshaada oo wuxuu rujin doonaa geed kasta oo shar leh oo noloshaada ku jira magaca Ciise. Haddii aad rabto xorriyadda ruuxaan, aan wada tukanno.
Aabbe Sayidow, waan weyneeyaa magacaaga maxaa yeelay waxaad tahay Ilaah. Waxaan kaaga mahadcelinayaa badbaadintaada, naxariistaada, iyo bixintaada. Magacaagu ha ku sarreeyo magaca Ciise.
Aabe Rabbow, maanta ayaan hortaada imid maxaa yeelay waan ka daalay dhammaan dhaxalkii xumaa ee noloshayda saameeyay. Waxaan ku baryayaa naxariistaada, inaad dhaxal kasta oo shar leh ku qaadatid noloshayda magaca Ciise.
Sayidow Ciise, waxaan kala firdhiyaa qaab kasta oo aqoonsi oo dhaxalka xun u adeegsado inuu igu garto weerar maanta magaca Ciise. Dhar kasta oo shar ah oo aan ka dhaxlay gurigii aabbahay, ayaan maanta kugu gubay magaca Ciise.
Dhar kasta oo jinni ah oo ka socda guriga hooyaday oo loo adeegsaday in lagu daboolo, ayaan maanta kaa saarayaa magaca Ciise.
Sayidow, qaab kasta oo shar leh oo reerkayga burburinaya, maanta ayaan ku joojiyay magaca Ciise. Habaar kasta oo jiil oo saameeya qoyskayga, waxaan maanta kugu jebinayaa magaca Ciise.
Harqood kasta oo fadhiidnimo ah oo saameeya dadka reerkayga markay gaaraan da 'gaar ah, waxaan maanta ku baabi'inayaa ruuxaas magaca Ciise.
Waxaad tahay ruuxa madhalaysnimada ah ee dhib ku haya qof kasta oo reerkayga ka mid ah, iska ilaali ku hay magaca Ciise. Waayo, waa qoran tahay, waxaa naloo bixiyey magac ka sarreeya magacyada kale oo dhan. Magaca Ciise, jilib walba waa inuu sujuudo, carrab walbana waa inuu qirtaa in Masiixu yahay Rabbiga. Ruux kasta oo madhalaysnimo ah, maqal codka Rabbiga; waxaa lagaa qaaday magaca Ciise.
Waxaan ka soo horjeedaa geerida afartan magaca Ciise. Dhaxalkii sharka ahaa ee aad igu soo rogtay xayiraadda dhimashada, waxaan maanta kugu baabi'inayaa dabkii ruuxa quduuska ah.
Waayo, waxaa qoran, Anigu ma dhiman doono, laakiin waan noolaan doonaa. Sayidow, waxaan ka soo horjeedaa qaab kasta oo dhimasho ah oo ku jira farcankayga. Waxaan ku jabiyay haynta habaarkan oo kale magaca Ciise.
Aabe, dhaxal kasta oo addoonsiga iyo addoonsiga ah, maanta waan ku baajinayaa magaca Ciise. Dhiigga Ciise ayaa i xoreeyay, aniguna xor baan ahay. Dhaxal kasta oo jinni ah oo addoonsiga ah oo doonaya inuu igu xidho silsilado ayaa maanta dab ku qabanaya magaca Ciise.
Sayidow, axdi kasta oo dhiig leh oo ku yaal aabbahay ama hooyaday oo iga soo horjeeda, maanta waad ku baabba'day magaca Ciise.
Rabbi Ciise, iyada oo la raacayo dhiigga aad ku daadisay iskutallaabta Calvary, waxaan ku baabi'iyaa axdi kasta oo dhiig ah oo ka soo horjeeda horumarka noloshayda magaca Ciise.
Sayidow, habaar kasta oo la dhaxlay oo xaddidaya koritaankeyga nolosha, maanta waan ku baajinayaa magaca Ciise. Waayo, waxaa qoran, Masiix baa inkaar inoo noqday, maxaa yeelay, inkaaru ha ku dhacdo kii geedka laga soo deldelay. Waxaan baabi'iyaa nooc kasta oo habaar qarniyadeed ah oo dhibaato ku keeni kara noloshayda maanta magaca Ciise.
Culeys kasta oo dhibaato ah oo jiilba jiil kale u gudbaya ayaa maanta dab ku qabsada magaca Ciise. Waxaan diidey inaan noqdo qaataha dhaxalka xun magaca Ciise.
Dhaxal kasta oo guuldaro ku ah noloshayda, waxaan kugu baabi'in doonaa dabka Ruuxa Quduuska ah. Waxaan xorriyaddayda ugu sheegayaa xaqiiqda maanta magaca xoogga leh ee Ciise.
article Previous5 Sababood Oo Mu'miniintu Cabsida Ugu Noolaadaan
Next article10 Mabaadi'da Baybalka ah Qof kasta oo Ganacsade Masiixi ah waa inuu raacaa
Salaadiinta Dhabta Ah Waqtiyada Quusashada
Sabuurradii 40 Aayadihii Aayadda
Qodobbada Salaadda ee Ku Saabsan Faragelinta Ilaah ee Aayadaha Baybalka
Aayadaha Baybalka ee carruurta